Airbus dia manasonia ny rafitra fiaraha-miasa maharitra miaraka amin'i Luksemburg
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Airbus dia manasonia ny rafitra fiaraha-miasa maharitra miaraka amin'i Luksemburg
Airbus sy ny governemanta Luxembourg dia nanao sonia Memorandum of Understanding (MoU) hametraka lamina ho an'ny fiakaran'ny fiaraha-miasa maharitra manerantany amin'ny sehatry ny fiarovana an-tserasera, ny teknolojia an-habakabaka, ny rafitra fiaramanidina misy pilote lavitra ary koa ny fiaramanidina elatra rotary.
Nandritra ny fitsidihan'ny fanjakana tany Frantsa an'ny Mpanjakavavin'izy ireo dia ny Grand Duke sy Grand Duchess of Luxembourg ary nandritra ny fitsidihana an'i Airbus tany Toulouse, dia nifanaraka ny roa tonta hanamafy ny fiaraha-miasa indostrialy ary hampivelatra ny fiaraha-miasa amin'ny fikarohana.
Ao amin'ny fiarovana an-tserasera sy eo amin'ny sehatry ny faharanitan-tsaina sy fiofanana, Airbus dia hampivelatra fiaraha-miasa amin'ny Centre Luxembury Cyberecurity Competence Center (C3), programa fiaraha-miombon'antoka amin'ny daholobe miankina amin'ny fanjakana, hanomezana fahaiza-manao, fahaiza-manao ary fahaiza-manao amin'ny cyber, ary koa toeram-piofanana sy andrana amin'ny toekarena mpilalao. Manaiky ihany koa ny Airbus hanombatombanana ny fahafahan'ny fiaraha-miasa maharitra miaraka amin'ny LuxTrust, tompon'andraikitra fanamarinana tsy miankina amin'ny fanjakana sy tompon'andraikitra amin'ny serivisy fitokisana izay mamoaka sy mitantana ireo mombamomba nomerika miaraka amin'ny filaminana sy fanarahan-dalàna avo lenta. Hanohy sy hanitatra ny fiaraha-miasa amin'ny GIE Incert ihany koa ny Airbus. Eny amin'ny habakabaka, Airbus sy ny Governemanta Luxembourg dia hamantatra ireo faritra iaraha-miasa amin'ny toekarena amin'ny habakabaka ho avy.
Ao amin'ny sehatry ny fiaramanidina elatra rotary, Airbus dia ho lasa mpiara-miombon'antoka tombony ho an'ireo orinasa any Luxembourg, hametraka torolàlana ho an'ny fiaraha-miasa vaovao sy nitarina. Ny vintana dia misy koa ny hetsika fikarohana sy fampandrosoana.
"Ny fiaraha-miasa amin'ny Airbus dia mifanaraka amin'ny Toro làlana momba ny fiarovana an'i Luxembourg amin'ny 2025+ hametrahana ny rafitra fampandrosoana ny fiarovana an'i Luxembourg," hoy i Etienne Schneider, lefitry ny praiminisitra lefitra, minisitry ny toekarena ary ny minisitry ny fiarovana. "Ao anatin'ity rafitra ity dia mamolavola paikady ho an'ny indostria, ny fanavaozana ary ny fikarohana izahay mba hampidirana ny rafitra ara-toekarenan'i Luxembourg amin'ny fananganana fahaiza-miaro rehefa manohana ny fitakiana fampandrosoana ny fahaiza-manao amin'ny laharam-pahamehana amin'ny OTAN sy ny EU."
Patrick de Castelbajac, Executive Vice President Strategy and International ao amin'ny Airbus, dia nilaza hoe: "Manamafy ny fiaraha-miasa aminay amin'ireo firenena mpiara-miasa Eoropeana sy OTAN izay efa ela indrindra izahay. Mino izahay fa ity fifanarahana ity miaraka amin'i Luxembourg dia hanana tombony iraisana amin'ny faritra vaovao sy manaitaitra sasany toy ny fiarovana, habakabaka, fiarovana amin'ny Internet ary angidimby. Manantena ny hampitombo ny fiaraha-miasa maharitra amin'i Luxembourg i Airbus. ”
Anisan'ny MoU i Airbus nanaiky ny hanome fotoam-pampiofanana an'ireo orinasa monina any Luxembourg mba ho tonga mpamatsy. Delegasiona solontenan'ny ekipa mpanatanteraka avy any amin'ny mpamatsy vola any Luxembourg no nandray anjara tamin'ny fivoriana fanoloran-tena natokana androany tao amin'ny tobin'ny Airbus.
Ny Konferansa momba ny fiarovana sy fiaramanidina momba ny fiaramanidina 2018 dia mijery ny fiovan'ny teknolojia
Seho IT&CM China 2018: Solontena lehibe, mpanohana